I-designable nail design, I-autumn-Winter i-2015-2016 - iimbono ezihle kakhulu ezinokwakheka komzimba
Ubuhle bomfazi Ukucoca kunye nokuhamba
I-designable nail design, Ubusika 2016: ifoto yomntu onamandla wokudala, iAntumn-Winter, 2015-2016
Ukuhlanjululwa okufanelekileyo kunye nesicatshulwa kuyimpawu ebalulekileyo yimuphi umfanekiso wesifazana. Ifowuni yokupakisha kwepiyilethi ishintshana ngesantya esifanayo kunye neendlela ezikhoyo kwihlabathi lokugqoka, kuba ezi shishini zibini zihlobene. Sikulungele ukuhlaziywa kwimihla ngemihla yamanqatha e-autumn-Winter 2015-2016, ukwenzela ukuba nakwixesha elibandayo ubonakala ngokugqibeleleyo kwiingcebiso zeempiki zakho.
Ukwakhiwa kwezinto eziphathekayo zeempahia ezifutshane, iAntumn-Winter 2015-2016
Ngexesha elizayo lekwindla-ebusika, izipikili zexesha elifutshane, i-oval kunye ne-almond-shaped are still real. Ifom elula edibene neendlela eziphambili zelo festile - ubunjalo kunye nobume bemvelo.
Iphayilethi ephathekayo ye-varnishes kweli xesha lifana nokusabalalisa amatye anqabileyo: i-emerald, i-sangria, ebomvu, i-lemon, i-indigo, insimbi, i-cypress. Imibala ebalaseleyo yoyilo lweekhonkwane ezimfutshane iya kuba yinto enzulu yewayini, isitshalo seqanda, i-purple, ithokoleta, i-cherry.
Eyona nto ixhamle kwiiphonkwane ezimfutshane zibukeka ezibonakalayo kweli xesha lexesha le-caviar manicure. Ngoncedo lweengubo ezincinci, ezifana namaqanda eentlanzi, abakhangeli bacebisa ukwenza kwimihla ngemihla kunye nokudalwa kwemikhosi. Umgaqo owodwa: imibala efudumeleyo yohlobo lwe "caviar" iya kulungelelanisa imihla ngemihla, kwaye iyancinci - i-manicure kwisiganeko esiyimbeko.
Imibala kaMat kunye ne-Pastel yexesha le-manicure I-Autumn-Winter i-2015-2016, ifoto
Ukwakhiwa kwezipikili ezenziwe kwiitoni ze-pastel azikho ngaphantsi kweendawo zayo. Phakathi kweendlela ezisemgangathweni zingabonakaliswa ukuguqulwa komzimba kwindlela yokwenza izibilini zesibhakabhaka nesimo sobude, ehlanganiswe nge-varnish ecacileyo kunye ne-glitter. I-shade ye-pastel shades ehamba phambili yexesha elilandelayo: i-minti, i-turquoise, i-peach ebandayo, i-gray-blue, i-milky. Iimpawu ze-Beige ne-pinki zisekondari.
I-Matte manicure iya kuba phakathi kweenqweno eziphambili zekwindla-ebusika ngo-2015-2016. Kuye, i-dark shades yemvelo iya kuba mpawu: i-melange, i-black, i-khaki, i-burgundy, ithokoleta.
Ukuqulunqwa kwezinto ezinokwakheka kwezikhonkwane eziqhakazile zonyaka we-Autumn-Winter, 2015-2016
Kwixesha elithembisayo i-Autumn-Winter i-2015-2016 kwakukho indawo yokukhonkwane kwezikhonkwane. Ulwakhiwo lwangaphambili luya kubandakanya iipateni zejometri, iimifanekiso eziphathekayo zezilwanyana, amatye aqingqiweyo kunye neentsimbi. Indlela elula kunye ekhawulezayo yokufumana umquba oqhakazileyo, owenzela amehlo ukusebenzisa i-lacquer nge-glitter. Kulo xesha, abalingisi bee-stylists bacebisa ukukhetha isambatho kunye ne-glitter ukudala isiqhelo esingavamile sesiFulentshi.
Abamemezeli bezondlo zeekhonkco kufuneka bahlawule ingqalelo kwindlela ebonakalayo-umphumo wamatye anqabileyo. Olu lwakhiwo luyenziwa ngoncedo lwe-gel ekhonkco lwe-nail kwaye luxelisa iimpawu zendalo zemvelo. Ngokuqhelekileyo, loo manicure iyongezwa ngegolide okanye zesilivere, ezizalisa umfanekiso.
I-Velvet softness: "i-fluffy" ye-nyl-trend
Imveliso yokunakekela isikhokelo
I-Aquarium design of nails
Ziyiphi i-manicure ehlangeneyo?
Ubuhle be-Gothic ekudaleni i-manicure
Inkolelo kunye nenyaniso malunga nokuhamba
Ijacket emhlophe emhlophe
Indlela abazali abangayilungiselela ngayo abantwana esikolweni
Indlela yokuhlakulela ukubhala ngesandla okuhle?
I-Horoscope: Unyaka omtsha, iTaurus
Izenzo eziqinileyo zomzimba omhle
Iintsholongwane zendalo zemvelo - enye yendalo engokwemvelo
Indlela yokuphatha impumlo ye-runny kwindlela yoluntu lwabantu
Imikhwa emi-5 eya kusindisa isondo
Inkqubo yokufundisa abantwana bebhukuda
Indlela yokuchonga uhlobo lomntu inja yakhe
Ukunyamekela isikhumba kwi-décolleté
Ukukhutshwa koBrown kwabasetyhini ngamaxesha ahlukeneyo
Iipulo zifakwe ngenyama enqabileyo
Amantongomane e dessert
Yoghurt kunye nezinye iimveliso zobisi eziphilileyo
Umntwana uphupha amaphupha amabi
Imbali ye powder
Iimpawu ezichanekileyo zoNyaka omtsha we-2018 weNjumba yomNayile